पहिरोले पुरिएर एकको मृत्यु, ४ जना घाइते - Everest Dainik - News from Nepal
बझाङ, चैत १० । बझाङमा पहिरोले पुरिएर एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको केदारस्युँ गाउँपालिकाको वडा नं. ४ खिल्लेख दोबाटो सुदाडामा बालुवा खन्दा माथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर एक जनाको मृत्यु भएको हो ।
मृत्यु हुनेमा केदारस्युँ गाउँपालिका वडा नं. ४ का ३५ वर्षीया मनादेवि भट्ट रहेकी छन् । उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा अन्य ४ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा निर्मला भट्ट, जानकी भट्ट, कलादेवी भट्ट र हंसा भट्ट हुन् ।
घाइतेमध्ये कलादेवी र हंसाको अवस्था सामान्य छ भने निर्मला र जानकीको अवस्था गम्भीर छ । उनीहरुलाई उपचारको लागि देउरा पठाइएको स्थानीय लोकराज भट्टले जानकारी दिए । सिचाईँ नहरको लागि बालुवा निकाल्दै गर्दा पहिरो खसेको हो ।